ဘလော့ သုံးနှစ်ပြည့် | ပျူနိုင်ငံ
ပေါငျမွို့နယျ PDF မှ NUG တောငျပိုငျးတိုငျးစဈဌာနခြုပျသို့ ဝငျရောကျ
ဖီလငျ ၃၉ …
ငါတို့မြှျောလငျ့ခဲ့တာက ငါတို့မြှျောလငျ့သလို မဟုတျတဲ့အခါ
COVID 19 နှင့် စပ်မိစပ်ရာများ
Singapore style fried carrot cake (Chai Tow Kway)
မွနျမာ့ရေးရာ သတငျးပဒသော (၄ ဖဖေျောဝါရီ ၂၀၂၁)
သူ့အကွောငျး ကိုယျ့အကွောငျး အခဈြတို့အကွောငျး (၈)
မွငျးခွံမွို့၊ ကိုးဆောငျတိုကျ ဆရာတျောဘုရားကွီး ဘဒ်ဒန်တသောဘိတ
Sweet December ! ❤❤
သူရဲကောင်း - မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)
Ethnic Entertainers Make the Scene
ညို ၊ ကိုကို နှင့် ဘောလုံးရွှေခေတ်
Rays Of Amour (a story from NAGA Land)
Hemlös räv -Homeless fox
Bogyoke Aung San Movie | Beta
၆၉ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့
ကဗျာက ထထ အော်တယ်
မန္တလေးဟာ မန္တလေးအငွေ့ ရှိနေဆဲ
ဒီမိုကရေစီ ရပြီ မေမေ
မြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ထွေရာလေးပါး
"လူတွေ ညာတတ်ပေမဲ့ သမိုင်းဟာ ညာလို့ မရဘူး၊ လူတွေမေ့တတ်ပေမဲ့ သမိုင်းဟာ မမေ့တတ်ဘူး"
ကောင်းကင် .. ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ပြောင်းလဲခြင်း
Saya Nyo's Poems
Thou Art A Hero U Win Tin!
ရတု @ 2011
ဒီမှာ “ ဟေ့ လူ”
အိုင်ဖုန်း ဖိုက် အလှူခံပါတယ်
Burmese Musician Win Maw: The Creator of Golden Melodies
ပြည် ကောင်း အောင်
သမိုင်းဝင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်းအဖုံးများ
ညီအကိုချင်းပေးစာ ( သို့ ) သံဒုတ်မှ သံခဲသို့ (သို့) သံခဲရေ - မင်းခေါင်းဖြတ် ခံနေရအုံးမယ်၊ ( သံဒုတ် )
♪ Angel Shaper
Turn On Ideas
Update News of Saya Puzaw Pwe - RIT/YIT/YTU EE (Singapore)
နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ရောင်းဝယ်ရေး အတတ်ပညာ
သရဲ- တစ္ဆေဇာတ်လမ်းများ (74)
ကွယ်လွန်သူ သမိုင်းပညာရှင် ဆရာကြီး ဒေါက်တာ သန်းထွန်း၏ သမိုင်းဆိုင်ရာ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို ဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် “ပျူနိုင်ငံ”လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ အမည်အရင်း အောင်ခင်မြင့်၊ စာရေးရင် စစ်ငြိမ်းဒီရေ အမည်နဲ့ ရေးပါတယ်။ လက်ရှိဒိန်းမတ် နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေဆဲ အိမ်ထောင်သည် တစ်ဦးပါ။ ko.aungdk@gmail.com
“ပျူနိုင်ငံ” ဘလော့ဆီ တိုက်ရိုက်လာတဲ့ မိတ်ဆွေများ၊ “ဒီမိုဝေယံ”
ရဲ့ စာမျက်နှာ၊ “မေနှင်းအေး ဗွီဒီယို” ရဲ့ စာမျက်နှာ၊ အမကြီး
“မခင်ဦးမေ” တို့ စာမျက်နှာနဲ့ မိတ်ဆွေ ဘလော့ စာမျက်နှာများ
ကတဆင့် လာကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါ ….
(၂၄.၀၂.၂၀၁၁)နေ့မှာ “ပျူနိုင်ငံ” ဘလော့ (၃)နှစ်ပြည့်ပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ မြန်မာပြည်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင်
တော်လှန်ရေးကာလမှာ မြန်မာစာဖြင့် ရေးသားသော သတင်းနဲ့ အခြားသော
ဘလော့ဂါတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ “ပျူနိုင်ငံ”ဘလော့
ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် “ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး” နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် “နာဂစ်မုန်တိုင်း”
တို့ရဲ့ ကြားကာလမှာ စတင် ခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ် ဘလော့တွေထဲမှာ
ပထမဆုံး ဖတ်ရှု သဘောကျခဲ့တဲ့ ဘလော့က “မာယာ” ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့
လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့သူကတော့ ကိုမိုးမောင်မောင် (အော်စလို၊ နော်ဝေး)
ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့အမည်ကို “ပျူနိုင်ငံ”လို့ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူ
သမိုင်းပညာရှင် ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ မြန်မာသမိုင်းဆိုင်ရာ
ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို သဘောကျပြီး ဒီအမည်ကို ပေးခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံး ဘလော့ ရေးဖော်ရေးဖက်တွေက “မောင်မျိုး” နဲ့ “မေ”
တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသိများလာအောင် အစောဆုံး လင့်ခ်ချိတ်ပေးခဲ့
တဲ့ ဘလော့ဂါများကတော့ “ကိုလူသစ်”၊ “ကိုအောင်သာငယ်”နဲ့
“မကေ”တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြော်ငြာပေးခဲ့တဲ့သူက “ကိုသက်ဦး”
ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့ကို ပထမဆုံး လုပ်ပေးခဲ့တဲ့သူက “ကိုသွင်မောင်”
ဖြစ်ပါတယ်၊ သူက အခုတော့ ဘလော့ မရေးတော့ပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကူညီခဲ့တဲ့ သူတွေက “ကိုတေဇာတေ”၊ ရုရှားနိုင်ငံ
မှာ ပညာလာသင်တဲ့ ညီငယ်တစ်ဦး (သူ့ခွင့်ပြုချက် မတောင်းထားမိ
လို့ အမည် မဖော်ပြနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါ)၊ “ကိုမင်းကျော်”
နည်းပညာပိုင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး အမြဲတမ်း ကူညီနေတဲ့သူက ကိုလင်းထက်
ဖြစ်ပါတယ်။ အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ ဘလော့ရဲ့ အပြင်အဆင် အကုန်လုံး
နီးပါးဟာ “ကိုလင်းထက်” ရဲ့ ကူညီမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ C-box ထဲမှာ ပထမ
ဆုံး လာရောက် ကြိုဆို နူတ်ဆ က်တဲ့သူတွေက ကိုသက်ဦး၊ မသင်းသင်း
အေးအောင် (ဘာဂမ်၊ နော်ဝေး)၊ ကုလားလေး (၁၉၈၉-၉၀ BESU အ.က.သ
ရန်ကုန်တိုင်း အဖွဲ့ဝင် ကျောင်းသားဟောင်း၊ ခေတ္တ- စင်္ကာပူ)တို့ ဖြစ်ပါ
တယ်။ “ဧရာဝတီ” သတင်း စာမျက်နှာနဲ့ “VOA မြန်မာဌာန” တို့ရဲ့ အစီ
အစဉ်တချို့မှာ မှတ်ချက်ပေး အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခင်
က ဝေဖန်ရေး ပါဝင်တဲ့ “သရော်”စာ ရေးသားတင်ပြမှုကြောင့် C-box
ကို ပိတ်ထားရတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
“ပျူနိုင်ငံ” ဘလော့မှာ ဖော်ပြရေးသားခဲ့တဲ့ “သရဲ တစ္ဆေ” ဇာတ်လမ်း
တွေကို ကော်ပီ Copy ကူးပြီး အီမေးလ်ကတဆင့် ဖြန့်ဝေသူတွေ
ကြောင့် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပိုင်းလိုက်
ရေးသားနေတဲ့ တချို့ အပိုင်းတွေကို PDF ဖိုင် ပြုလုပ်ပြီး ပို့စ်မှာ
တင်ခဲ့ပါတယ်။ google reader ဖက်ကနေ ကူးယူလို့ မရအောင်
လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် စာဖတ်သူအနေနဲ့ အခက်အခဲ ဖြစ်ခဲ့ရင်
ယခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မဲဝဲ (malware) ပြဿနာကြောင့် ဘလော့
ရေးရတဲ့ အဖြစ်ဟာ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အခြားဘလော့
ဂါတွေရဲ့ နောက်ဆုံးပို့စ်တွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ရော အခြားစာဖတ်သူ
မိတ်ဆွေကိုပါ သိစေချင်ပါတယ်။ မဲဝဲ ပြဿနာဟာ နောင်လာမယ့်
၂- လ၊ ၃- လအထိ ဖြေရှင်းလို့ မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ဂူဂဲလ် (google)
နဲ့ ပျူနိုင်ငံ တို့ “ကတ္တီပါလမ်းခွဲ” လုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစား
လောလောဆယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မဲဝဲ (malware) ပြဿနာကြောင့်
ဆိုဒ်ဘားမှာ ချိတ်ဆွဲခဲ့တဲ့ လင့်ခ်ပေါင်းများစွာကို ဖြုတ်ချထားရပါတယ်။
ပျက်ကွက်ခဲ့တာ အကြိမ်ပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး။ ဘယ်သူ ဘယ်နေ့
က ပို့စ်အသစ်တင်လိုက်လဲဆိုတာကို google reader ကနေ လှည့်
စာလာဖတ်တဲ့ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေများ၊ ဘလော့ရေးဖော်ရေးဖက်
မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ်များအားလုံး ချမ်းသာ ကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ …။
Posted by ကိုအောင် at 15:00
Happy Birthdayး) ၃ နှစ်အတွင်း ကြံ့ကြံ့ခံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာပေါ့ ဆက်လက် ဘလော့ဂင်နိုင်ပါစေ ။
24 February 2011 at 15:15
ကိုအောင် ဘလော့ ၃ နှစ်သားလေး နှစ်ပေါင်း များစွာ တည်တံ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
မယ်ဝဲကြောင့်တော့ စိတ်မသက်မသာ မဖြစ်ပါနဲ့ ကိုအောင်ရေ ... တခြားဘလော့ဂါတွေတောင် ၀ဲတွေနဲ့ ဆက်ရေးနေကြတာပဲ။
သူကပဲ ၀ဲနဲ့သတ်မလား ကိုယ်ကပဲ ဇွဲနဲ့ဆက်မလား ... ပျူနိုင်ငံကြီး ဆက်လက် အဓွန့်ရှည်တာကိုသာ မြင်ချင်ပါတယ်။
24 February 2011 at 15:35
လက်ဗလာ နဲ့ မကျင်းပ နဲ့ လေ ...း))
24 February 2011 at 16:02
သုံးနှစ်မှသည် နောက် နှစ်သုံးဆယ် ဆီသို့...
24 February 2011 at 16:07
ဖတ်ကောင်းတဲ့ ဘလောဂ့်တစ်ခုမို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်တံ့နေစေချင်ပါတယ်..
ရသစုံအောင် ရေးနိုင်တာမို့ စာတွေအများကြီးရေးပါဦး ကိုအောင်
နောင် နှစ်များစွာ များစွာတိုင်ပေါ့နော်
၃နှစ်သားလေး ပျော်ရွှင်ကျန်းမာ ၀ဲရောဂါပျောက်ပါစေသော်း)
24 February 2011 at 17:54
ဆက်ဂင်းနိုင်ပါစေ ကိုအောင်ရေ.. အနော်ကတော့ သရဲတစ္ဆေတွေနဲ့ စတင်ရင်းနှီးလာတဲ့သူပါဗျာ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်လက်အားပေးဆဲ.. နောက်ဆုံး ၀ဲ ပြဿနာတောင် ကိုအောင် ဆီက သတင်းရပြီး ကိုလင်းထက် အကူအညီနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်.။ ကိုယ်မသိတဲ့ နေရာတွေ ညွှန်ပြပေးတာရော.၊ သုတ ရသတွေ စုံလင်အောင် စားသုံးခွင့်ရတာ ကျေးတမာဒယ်။ နှစ်ပတ်လည် မှာ ဘာမှ စားသုံးခွင့်မရတာ ဟာတာတာပါ။
24 February 2011 at 17:55
သုံးနှစ်မှသည်... နှစ်ပေါင်းများစွာသို့...း))
မနားတမ်း ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ပါစေ.. သရဲဗိုလ်ကြီး :)
သုံးနှစ်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ ဆက်လက် စိတ်ကူးတွေ ပုံဖော်နိုင်ပါစေ။
24 February 2011 at 18:17
ိကိုအောင်၏ ဘလော့ဂ်လေး ၃ နှစ်ပြည့်မှသည် ထာဝရ တည်တံ့နိုင်ပါစေရှင်။
24 February 2011 at 22:00
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ စာတွေ ဆက်လက် ရေးသားနိုင်ပါစေ...
25 February 2011 at 13:43
သုံးနှစ်အရွယ် ဘလောခ်တစ်ခု ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့လို့ ကိုအောင်ကို လေးစားပါတယ်ဗျာ။ နောင်ဒီထက်မက တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ဘလောက်က မေးလ်ဝဲဒဏ်ကတော့ ဘယ်တော့မှ အပြီးသတ်မလဲမသိဘူး။ ဝေါပရက်စ်မှာတော့ ဒီလိုမျိုးမရှိဗျ။ ဘလောခ့်ကို https အနေနဲ့ ပေးသုံးရင်တော့ ဒီလိုဖြစ်လာစရာ မရှိလောက်တော့ပါဘူးဗျာ။ အဲဒီအချိန်ကိုပဲ မျော်ကြရဦးမှာပေါ့။
ဆက်လက်ချီတက်ကြတာပေါ့၊ ပျူနိုင်ငံ ဆိုတာကိုစသိသိရခြင်း
25 February 2011 at 13:44
ကိုအောင့်ကို၃နှစ်ပြည့် အမှတ်တရအနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါရစေ။
ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို ပထမဆုံးလင့်ခ် လာချိပ်သွားတာ ကိုအောင်ပါပဲ။
လင့်မချိပ်ပေးခင်က လာဖတ်သူ များလှ လွန်ရောကျွံရော ၅ယောက်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။
သရဲကားကလည်းကြည့်ချင် ကြောက်ကလည်းကြောက် ဆိုတော့ အသံလေးပိတ်ပြီးကြည့်ရတယ် ။ အတော်အကြောက် သက်သာတယ် ။ အဲ ကိုအောင့်စာ ဖတ်တော့ကျ ပြောင်းပြန် ကြောက်ကလည်းကြောက် စာကလည်းဖတ်ချင်ဆိုတော့ သီချင်းလေးဖွင့်ထားရတယ် ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ သရဲခြောက်တဲ့ ပျူနိုင်ငံကြီး ဆက်လက် ချီတက်နိုင်ပါစေလို့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲ ဆုတောင်း လိုက်တယ် ။ အဟေးဟေး ။
25 February 2011 at 13:45
25 February 2011 at 13:46
Happy Birthday!!! ပျော်ရွှင် စွာ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ။ နောက်ကျသွားတာဆောရီးနော့်။ ဘလေ့ဂ်မှာ malware တွေကို ကုပြီး Link တွေ ဖြုတ်ထားတာအပြင် လိုက်လည်ဖို့လည်း အချိန်သိပ်မရတာနဲ့ ဘယ်သူအသစ်တင်မှန်းလည်း မသိဘူး။ နောက်မှ စိတ်ချရမှ Link တွေ ပြန်ချိတ်ရမယ်။
25 February 2011 at 13:55
25 February 2011 at 14:58
Kay said on 24 February 2011 15:24
ကိတ်မုန့်လေး ဘာလေး နဲ့ လာကန်တော့လေ..း)
ဒီကပဲ..မွေးနေ့ ကိတ် ပြန်ပေးလိုက်ပါတော့မယ်..
25 February 2011 at 15:43
sonata-cantata said on 24 February 2011 15:36
(စာစောင် နာမည် မဟုတ်ပါ။ အားပေးတာပါ။)
25 February 2011 at 15:44
ကိုအောင်ရေ (၃)နှစ်မြောက် ဘလော့(ဂ်) အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ဆက်လက် တည်တံ့နိုင်ပါစေ.. အရေးအသားကောင်းတဲ့ ပျူနိုင်ငံ ဘလော့(ဂ်)ပိုင်ရှင် ကိုအောင်.. အောင်မြင်မှု ပျော်ရွှင်မှုတွေ
25 February 2011 at 19:43
လူဘဝကို ရလာတာဟာ ဒုက္ခနှင့် သုက္ခတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ရှောင်လွဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ အောင်မြင်သည် ဖြစ်စေ၊ မအောင်မြင်သည် ဖြစ်စေ ဒီလိုပဲ ဖြတ်ကျော်သွားရမှာပေါ့။ စိတ်ဓာတ်မကျကောင်းဘူးနော်။
26 February 2011 at 09:37
၀ဲကင်းကင်းနဲ့ ဆက်လက် ဂင်းနိုင်ပါစေဗျာ
» အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
» အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု
» ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)
» ဦးထွန်းလွင် (မိုးလေ၀သ)
မြန်မာ့အိမ်ယာ အဆောက်အဦးများ ဆိုလာစွမ်းအင် နည်းပညာကို သုံးသင့်ပြီ
နေရောင်ခြည်ကို ယူ၍ အကြိုးအမြတ်ထုတ်သူများ ယနေ့ ၂၁ ရာစုမှာခေတ်မီ မြို့ပြအိမ် များနဲ့ ထုတ်လုပ်မှု ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကြီး တွေဟာ သဘာဝကို အခြေ...
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက ကျနော့် မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆုံတိုင်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မြန်မာနိုင်ငံဆီ အလည်ပြန်တုန်းက ကြုံခဲ့ရတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဖြစ်အပျက်တေ...
ဆရာ ဘဲလားလေဘာတီ ရဲ့ ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်း နဲ့ ပတ်သက်သော သုံးသပ်ချက်
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းသည် ပိဿာချိန် (၁၈,၀၀၀) တန်ချိန်၂၉ ဒသမ ၃၃ တန်သာ ရှိရမည်။ ၂၉၄ တန် လုံးဝမဟုတ်ပါ။ သမိုင်းဆိုတာ ဖျောက်ဖျက်၍ရသော အရာတစ်ခ...
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ဘယ်နိုင်ငံက ပိုလှသလဲ ... !!! အပိုင်း(၁)
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံဟာ ဥရောပတိုက်မှာ လှတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့ ပြောရမှာတောင် တော်တော်ကို ခက်ပါတယ်။ ကျနော့် အမြင်ပါ။ ဥရောပတိုက် ကုန်းမကြီးနဲ့ စပ်ဆက်ေ...
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ up to date သတင်း အချက်အလက်များ စုစည်းမှု
( ဤလင့်ခ်ကို ပြန်နှိပ်ပြီuးp to date နောက်ဆုံး သတင်းအချက်အလက်များကို ထပ်မံ့ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။) (၂၆ ) ဖြူးမဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုမှာသာ ကြံ့ဖွ...
Pageviews all time history
ပျော်စရာ ရွှင်စရာ သရဲကမ္ဘာ
လွင်ပြင် ခေါ်သံ (အပိုင်း- ၈)
ရောင်နီလာနံနက်ခင်းဆီသို့ (အပိုင်း ၆)
သူတို့ တင်ပြသမျှ (၁၈.၀၂.၂၀၁၁)နေ့
သူတို့ တင်ပြသမျှ (၁၇.၀၂.၂၀၁၁)နေ့
သူတို့ တင်ပြသမျှ (၁၆-၀၂-၂၀၁၁)နေ့
ဒီနေ့ ဖတ်စရာအချို့ ...
လွင်ပြင် ခေါ်သံ (အပိုင်း- ၇)
လွင်ပြင် ခေါ်သံ (အပိုင်း- ၆)
ကော်မန့်မှတဆင့် မဲဝဲ(malware) တင်ပို့မှု ကာကွယ်ရေး
ဘလော့အများအပြား မဲဝဲလ် ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု
ရောင်နီလာ နံနက်ခင်းဆီသို့ (အပိုင်း- ၅)
©2011 - ပျူနိုင်ငံ | Design by: O Pregador | Powered: Blogger Templates